Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Niverina tany amin'ny faritra mavo i Italia tamin'ny 26 aprily » Page 3
Fampiasam-bola hitombo amin'ny ho avy
Aorian'ny fivoahana avy amin'ny vonjy taitra, Italia tsy maintsy hiverina amin'ny fitomboana ihany amin'ny farany. Ny drafitra fanarenana sy faharetana nasionaly (PNRR) no ho vato ifaharana amin'ny famoahana indray: Italia dia manana 191.5 miliara euro, ka 69 no tsy voaloa, 122 no indram-bola, ary 30 miliara kosa no avy amin'ny tahiry miaraka amin'ny PNRR.
Miaraka amin'ity famatsiam-bola ity, ny asa izay manana faravodilanitra lava kokoa noho ny 6 taona faharetan'ny Tahiry Fanarenana, saingy tsy maintsy hihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha mitovy, dia hamatsy vola raha azo atao.
Ity drafitra ity dia fotoana iray manan-tantara amin'ny famelomana indray ny toekarena ary mitaky programa fanovana fatra-paniry laza mba hiorenan'ny loharanon-karena ary tsy misy sakana amin'ny fisokafan'ny toerana fananganana. Efa eo am-panatanterahana izany ny governemanta, hoy ny fanazavan'i Draghi, izay nanendry komisiona ho an'ny asam-panjakana 57, efa fantatra fa miandry ny fampiharana azy.
Nilaza ny PM fa namaritra ny fandaharam-potoana mazava sy azo tanterahina isaky ny asa ny governemanta, ary ny minisiteran'ny fotodrafitrasa sy ny fivezivezena maharitra dia hanao fanaraha-maso isan-telo volana amin'ny fampiharana ireo dingana samihafa mba hanesorana haingana ireo sakana rehetra.
Ny PM Draghi koa dia niresaka momba ny trosam-bahoaka Italiana avo, nampatsiahy ny maha-zava-dehibe ny "trosa tsara" izay mety hiteraka fitomboana. Tamin'ny mason'ny omaly, ny tsena dia nijery ny zana-bolan'ny trosam-bahoaka, izay ambany dia ambany ankehitriny; amin'izao masontsika izao dia mijery fitomboana ny tsena izay tsy maintsy maharitra.
Nanazava ihany koa i Draghi fa aorian'ny krizy amin'ny aretina dia tsy azo inoana mihitsy hoe hiverina hampihatra ny lalàna mifehy ny tetibola toy ny taloha ihany i Eropa. Ny firenena eropeana rehetra dia tsy maintsy miverina amin'ny làlan'ny fitomboana maharitra, ary noho io antony io dia tsy maintsy manohy manome loharanom-bolam-panjakana ho an'ny toekarena ny governemanta, mifantoka amin'ny famatsiam-bola indrindra rehefa vita ny vonjy taitra.
Namarana ny teniny i Draghi tamin'ny filazany hoe: “Tsy marim-pototra ny kiana an'i Speranza. Manaja azy aho ary tiako ho ao amin'ny governemanta izy. Misaotra ny minisitra Speranza aho tamin'ny asa vitany. ”